အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြသူ
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြသူ
Posted by smytu1996 on Oct 22, 2010 in Aha! Jokes, Satire, News, Photography, U.S. News |7comments
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားမိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြသူအား​​ ​ဖမ်း​ဆီး​လာ​စဉ် © dailychilli
အ​သက်​ ​၂၄​​ နှစ်​ရှိ​ ​လူ​တစ်ဦး​သည်​​ အ​လောင်း​အ​စား​ ​တစ်​ခု​ပြု​လုပ်​ပြီး​နောက်​​ အ​မေ​ရိ​ကန်​သ​မ္မ​တ​​ ဘာ​ရတ်​အို​ဘား​မား​ ​မိန့်​ခွန်း​ပြော​မည့်​​ အ​ခမ်း​အ​နား​တစ်​ခု​အ​တွင်း​​ လူ​အ​များ​ ​စု​ရုံး​နေ​စဉ်​ ​ကိုယ်​တုံး​လုံး​ ​ချွတ်​ပြ​ခဲ့​ကြောင်း​ ​သိ​ရ​သည်​။
ဘီ​လျံ​နာ​ ​သူ​ဌေး​တစ်ဦး​နှင့်​ ​ဒေါ်​လာ​တစ်​သန်း​ကြေး​ ​အ​လောင်း​အ​စား​ ​ပြု​လုပ်​ရန်​ ​သ​ဘော​တူ​ညီ​မှု​ ​ရ​ရှိ​ပြီး​နောက်​ ​ဂျူ​အန်​ရို​ဒ​ရီ​ဂွတ်​သည်​ ​ဖီ​ လာ​ဒဲ​ဖီး​ယား​ရှိ​ ​သ​မ္မ​တ​အား​ ​ကြို​ဆို​နှုတ်​ဆက်​နေ​သူ​များ​ကြား​ ​ယ​ခု​လို​ ​အ​တတ်​ဆန်း​ခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်​သည်​။​ ​မိ​မွေး​တိုင်း​၊​ ​ဖ​မွေး​တိုင်း​ဖြင့်​ ​အ​ခမ်း​အ​နား​သို့​ ​တက်​ရောက်​လာ​သော​ ​ဂျူ​အန်​ကို​ ​ရဲ​များ​က​ ​ ဖမ်း​ဆီး​ခဲ့​သည်​။​ ​ဗြိ​တိ​သျှ​ ​ဘီ​လျံ​နာ​ ​သူ​ဌေး​ကြီး​ ​အ​ကီ​ဒေး​ဗစ်​က​ ​အို​ဘား​မား​ရှေ့​သို့​ ​ကိုယ်​တုံး​လုံး​ဖြင့်​ ​သွား​ပြ​သူ​ကို​ ​ဒေါ်​လာတစ်​သန်း​ ​ဆု​ချီး​မြှင့်​မည်​ဟု​ ၎င်း​၏​ ​ဝက်​ဆိုင်​ဖြစ်​သည့်​ battlecam.com​တွင်​ ​ရေး​သား​ခဲ့​ပြီး​နောက်​ ​ဂျူ​အန်​က​ ​ယ​ခု​လို​ ​ပြု​မူ​ခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်​သည်​။​ ​ဒေး​ဗစ်​က​ ​ဂျူ​အန်​၏​ ​လုပ်​ရပ်​မှာ​ ​ပ​ထ​မ​ဆုံး​ဖြစ်​နိုင်​ကြောင်း​၊​ ​အို​ဘား​မား​ရှေ့​ထိ​ ၎င်း​ရောက်​သွား​ခြင်း​ ​ရှိ​မ​ရှိ​ ​မ​သေ​ချာ​ကြောင်း​၊​ ​သို့​ သော်​လည်း​ ​ထို​အ​တိုင်း​ ​အ​မှန်​ဖြစ်​လျင်​ ​ပိုက်​ဆံ​ကို​ ​ထုတ်​ပေး​ရန်​ ​ဝ​န်​လေး​နေ​မည်​ ​မ​ဟုတ်​ကြောင်း​ ​ပြော​ဆို​ခဲ့​သည်​။
အ​လောင်း​အ​စား​ ​စည်း​မျဉ်း​အ​ရ​ ​အ​မျိုး​သား​ဖြစ်​စေ​၊​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​ဖြစ်​စေ​ ​ကိုယ်​ တုံး​လုံး​ကျွတ်​ဖြင့်​ ​အို​ဘား​မား​ရှေ့​ ​ရောက်​ချိန်​တွင်​ battlecam.com​ဟု​ ​၆​ ​ကြိမ်​တိ​တိ​ ​အော်​ရ​မည်​ဖြစ်​ပြီး​ ​ရင်​ဘတ်​တွင်​လည်း​ ​ထို​ဝက်​ဆိုက်​အ​မည်​ကို​ ​စာ​တန်း​ရေး​ထိုး​ထား​ရ​မည်​ဖြစ်​သည်​။​ ​ဒေး​ဗစ်​က​ ၎င်း​သည်​ ​အို​ဘား​မား​အား​ ​နှစ်​သက်​သ​ဘော​ကျ​သူ​ ​တစ်ဦး​ဖြစ်​ကြောင်း​၊​ ​ယ​ခု​အ​လောင်း​အ​စား​သည်​ ​သ​မ္မ​တ​အား​ ​ကျီစယ်​မှု​ ​တစ်​ခု​သာ​ဖြစ်​ကြောင်း​ ​ရှင်း​လင်း​ပြော​ကြား​ခဲ့​သည်​။​ ​ရဲ​များ​သည်​ ​ဂျူ​ အန်​အား​ ​ခေ​တ္တ​ထိန်း​သိမ်း​ပြီး​ ​နောက်​ပိုင်း​တွင်​ ​ပြန်​လွှတ်​ပေး​လိုက်​ကြောင်း​ ​သ​တင်း​ရ​ရှိ​သည်
ဒေါ်လာတစ်သန်းကြေးတဲ့လား .. မြန်မာပြည်က ဟိုမော်ဒယ်လေးတွေကိုပြောလိုက်ကြပါဦး ။ ဒီမှာထွက်တဲ့ခိုးရိုက်ခံရတဲ့အခွေထက်ဈေးပိုရတယ်လို့။
yup..please see this post as jokes, but it was happened really!
သိတ်ကောင်းတဲ့ promotion ပဲဗျာ… အကုန်အကျလဲ အတော်ခံခဲ့ရတာပဲ
အော်… တယ်လည်း ခက်ပါလား လောင်းကစားမှုရယ်… တော်သေးတာပေါ့ ဒုက္ခမရောက်လို့ပေ့ါ
စောစောက ပြောရင် သိရင် မြန်မာပြည်က မော်ဒယ်တွေ တန်းစီနေလောက်ပါတယ်ကွယ်..။
ဒါနဲ့ ပုံထဲက လူမဲ အန်တီကြီးက ဘာလို့ လက်နှစ်ဘက်နဲ့ကာထားတာလဲ.. တဖက်ကာ တာတောင် မဟုတ်ဘဲ.. နှစ်ဘက်ကို လက်ကြီး လိမ်ပြီး ကာထားတယ်နော်.. ဓါတ်ပုံ ရိုက်နေတာမို့ ဖောဖော လုပ်နေတာလား..